China 2D pin baajị ụlọ ọrụ na-emepụta | Kingtai
2D lapel pin dị oke oke ma nwee ike iji ya n'ọtụtụ oge! Jiri ha maka inye onyinye, ncheta onyinye, nkwalite na Ezigbo maka nkwalite azụmaahịa dị elu, klọb na mkpakọrịta, baajị ndị a na-egosipụta ọkaibe dị elu. ihe niile dị n’etiti.
2D Lapel Pins nzọụkwụ mbụ site na ọnwụ kụrụ atụdo
Omenala a na - akpụzi site na ihe osise gị akwadoro,
na a na-eji ebu ihe eji kpopu ihe osise gi na mpempe ígwè ma obu nke ọla kọpa
Ozugbo e mechara, a hapụrụ ụdị ụdị ejiji gị edepụtara na nke izizi.
Nzọụkwụ ọzọ bụ aka na-egbu maramara, a na-eme ka elu igwe ndị a zụlitere na-emecha ka enyo mechaa, mgbe ahụ nzọụkwụ ọzọ bụ ịkpụcha usoro, maka ịkwanye ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ agba
Gold Nickel (ọlaọcha) ọla kọpa, na nickel ojii (ọlaọcha ojii / ojii chrome), Ọ bụ ezie na mpaghara ala jupụtara na enamel paint.small iji nwee ike iji ọrụ aka, ịmachi usoro nwere ike iji igwe na-ejuputa igwe.
Anyị na-eji Pantone agba nwere ike agwakọta kpọmkwem maka usoro ọ bụla, anyị nwere ike ịkwado ụkpụrụ gị nke ọma nke na-enye anyị nọmba Pantone.
Customdị omenala gị nwere ike ịgụnye ihe ruru agba isii ma nwee ike zọọ ya ụdị ọ bụla site na nhọrọ nke ọla edo, ọla ọcha, ọla kọpa ma ọ bụ oji ojii nickel plated finish. Opekempe iji buru ibu bụ 100 PC.
Anyị na-enye ọrụ nka na ọrụ nhazi yana usoro ọ bụla! Anyị Mee N'onwe Gị imewe ngwá ọrụ na Pantone agba kenha ọrụ ga-hụ na gị atụdo bụ kpọmkwem ihe ị na-eche. A na-enyocha nyocha niile ruo mgbe afọ juru gị afọ.
Nke gara aga: Mkpụrụ ego
Osote: Digital Bipụta lapel pin